Kiribati waxay xujeyn doontaa aragtidaada nolosha: Dib -u -furista Dalxiiska bisha Janaayo
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Kiribati waxay xujeyn doontaa aragtidaada nolosha: Dib -u -furista Dalxiiska bisha Janaayo
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Wararka Kiribati • News • Dadka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Waxay 700 mayl u dhowdahay Honolulu ilaa Jamhuuriyadda Kiribati, intii loo duuli lahaa Los Angeles ama San Francisco.
Kiribati waa mid ka mid ah jasiiradaha yar ee ugu caansan, iyo dahabka aan la taaban ee Dalxiiska Koonfurta Baasifigga.
Kiribati, oo si rasmi ah u ah Jamhuuriyadda Kiribati, waa ummad jasiirad madax -bannaan oo ku taal badweynta Badweynta Baasifigga.
Dadka joogtada ah waxay ka badan yihiin 119,000, in ka badan kala badh waxay ku nool yihiin agagaarka Tarawa. Gobolku wuxuu ka kooban yahay 32 atoll iyo hal jasiirad coral ah oo la kiciyey, Banab
Hay'adda Dalxiiska ee Kiribati (TAK) ayaa soo dhaweysay ku dhawaaqistii shalay by Te Beretitenti, Mudane Taneti Maamau oo ku saabsan go'aanka dowladiisa ee ah in la furo xuduudaha qaranka Kiribati laga bilaabo Janaayo 2022.
Kiribati waxaa loogu talagalay dadka socotada ah - kuwa u hamuun qaba sahaminta iyo ogaanshaha, dadka jecel ka -haqab -tirka dariiqa dalxiiska oo taga meelo aan hore u jirin, iyo dadka doonaya inay fahmaan waddan - kaliya ma arkaan.
Kiribati wuxuu ku dhawaaqay bishii Luulyo, waxay ilaalin lahayd xuduudaheeda.
Kiribati ayaa ka hor imaan doona aragtidaada sida ay noloshu noqon doonto waxayna ku tusi doontaa hab nololeed oo aad u qalafsan oo qoyska iyo bulshadu ay ugu horreeyaan.
Waxay ku taal Badweynta Baasifigga ee barbaraha, bariga Kiribati waxay ka bixisaa Jasiiradda Kiritimati kalluumeysi heer caalami ah (ciyaar iyo lafo labadaba). Galbeedka waxaa jooga Gilbert Group of jasiirado, kuwaas oo bixiya waayo -aragnimo dhaqameed oo cajiib ah.
Caasimadda dalka ee Tarawa waxay leedahay goobo taariikhi ah iyo farshaxanno halkaas oo mid ka mid ah dagaalladii ugu dhiigga badnaa ee Dagaalkii Labaad ee Adduunka, Dagaalkii Tarawa.
Haddii aad u soo booqanayso qayb ka mid ah shaqadaada, waxaan kugu dhiirigelin lahayn inaad sahamiyaan Kiribati inaad la kulanto waxyaalahaas lagu farxo - Koonfurta Tarawa ma aha inay noqoto Atoll-ka keliya ee aad booqato marka aad haysato 33 oo aad wax ka kala doorato, xitaa Waqooyiga Tarawa ee ku dhow waxay bixisaa aragti aad u kala duwan!
Ku dhawaaqistiisa, Madaxweyne Maamau wuxuu ku boorriyay dadka Kiribati ee u qalma tallaallada COVID-19 inay dhammaystiraan labada qiyaasood kahor dhammaadka sanadka. Wuxuu carrabka ku adkeeyay in midnimada iyo u hoggaansanaanta xannibaadaha iyo qawaaniinta ay aad muhiim ugu tahay badbaadada dhammaan I-Kiribati.
Madaxweynuhu wuxuu ugu baaqay ururada ragga iyo dumarka, kooxaha kaniisadaha, kooxaha dhalinyarada, ururada haweenka, Golayaasha Jasiiradaha, bulshooyinka iyo aabayaasha iyo hooyooyinka guri kasta inay gacan ka geystaan ​​dhiirigelinta xubnaha qoyska iyo saaxiibbada inay ka talaalaan fayraska dilaaga ah.
Iyada oo loo marayo Barnaamijkeeda Dib-u-bilaabashada Dalxiiska, TAK waxay soo saartay Kiribati Dalxiiska & Habsocodka Martigelinta ee Caadiga Cusub waxayna hadda qaadaysaa tababarka borotokoolka amniga ee COVID-19 dhammaan bixiyeyaasha hoyga.
Guryaha ku yaal Koonfurta Tarawa, Waqooyiga Tarawa, Abaiang, Tab North iyo Tab South ayaa dhammaystay tababarkooda halka inta kale ee hoyga iyo bixiyeyaasha adeegga dalxiiska ee jasiiradaha kale ay heli doonaan tababarkooda borotokoolka COVID-19 illaa Noofembar 2021. Maamulaha TAK, Petero Manufolau ayaa xaqiijiyay in tababar dib-u-cusbooneysiin warshadeed oo dhan la qaban doono Diseembar 2021, ka hor inta aan dib loo furin xadka Janaayo 2022.
Iyada oo qayb ka ah barnaamijkeeda dib -u -bilaabashada, TAK waxay sidoo kale bilaabi doontaa Istaraatiijiyadda Suuqgeynta Dijital ah bisha Sebtember si loo hirgeliyo laga bilaabo Oktoobar 2021, iyada oo la siinayo Jasiiradda Baasifigga 3 bilood si ay u bilowdo ololaheeda suuqgeynta iyo barnaamijyada.
Safarrada soo laabanaya ama booqanaya Kiribati markii ugu horreysay sannadka 2022 -ka waxay filan karaan waayo -aragnimo hagaagsan iyada oo loo marayo barnaamijka Mauri Mark, qiimeynta hoteelka, iyo barnaamijka aqoonsiga, iyo Mauri Way, barnaamijka Adeegga Macmiilka Dalxiiska Qaranka ee Kiribati ee dhammaan bixiyeyaasha adeegga dalxiiska.
Faahfaahinta shuruudaha socdaalka COVID-19 ee Kiribati iyo borotokoollada dib-u-furidda xadka caalamiga ah ee Janaayo 2022 ayaa lagula talin doonaa marka laga helo dowladda.